အွန်လိုင်း ODT-FILE ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အွန်လိုင်း ODT-file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
တိုးချဲ့မှု ODT နှင့်အတူ text files ထိုကဲ့သို့သော OpenOffice နှင့် LibreOffice အဖြစ်အခမဲ့ရုံးအယ်ဒီတာများ၏အားသာချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာသား, ဂရပ်ဖစ်, ဇယားများ: သူတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်၌ created ကို DOC / DOCX ဖိုင်တွေတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်တူညီတဲ့ဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သဆံ့နိုငျသညျ။ မဆိုသတ်မှတ်ထားသောရုံး ODT စာရွက်စာတမ်းအထုပ်၏မရှိခြင်းအတွက်အွန်လိုင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, Window အဘယ်သူမျှမအယ်ဒီတာများ, ပွင့်လင်းခွင့်ပြုနှင့် ODT-file ကိုရှုမြင်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပုံစံတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများစာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုပါကတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်များကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဘယ်သူမျှမကွဲပြားသကဲ့သို့ပင်, ထို့နောက်ကျနော်တို့အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာများနှင့်အဆင်ပြေက်ဘ်ဆိုက်များကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ်, Yandex Browser ကိုအသုံးပြုသူများကို Web browser ၏ built-in function ကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကရိုးရိုးစာရွက်စာတမ်းရှုမြင်ပေမယ့်လည်းသူကတည်းဖြတ်မသာဖို့ browser ကိုပြတင်းပေါက်သို့ဖိုင်ကိုဆွဲယူပါ။
Method ကို 1: Google Docs
Google ထံမှမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ - စာသားကို documents, spreadsheets နှင့်တင်ပြချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောကိစ္စရပ်များအတွက်အကြံပြုကြောင်းတစ်ခု universal web-based ဝန်ဆောင်မှု။ ဒါဟာသင်စာရွက်စာတမ်းရဲ့ contents တွေ့မြင်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အကြိုက်ကတည်းဖြတ်နိုင်သည်သာမကဘယ်မှာပြည့်စုံ Multi-line ကိုအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည်။ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင် Android ပေါ်မှာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, သင်ပြီးသားရှိသည်သောက Google ပေါ်တွင် account တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ် Gmail ကိုသုံးပါ။
Google Docs ကိုသွားပါ
ပထမဦးစွာသင်၏ Google Drive ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခံရဖို့ဆက်လက်တံ့သော, စာရွက်စာတမ်းကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ အပေါ်က link ကိုနှိပ်ပါဖိုင်တွဲရန်အအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, tab ကိုမှ navigate "Upload လုပ်ပါ" ("Loading").
drag'n'drop function ကိုသုံးပြီး window ကိုမှဖိုင်ကိုဖိဆွဲပါ, သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းရွေးရန်ဂန္လမ်းညွှန်ဖွင့်လှစ်။
ကြည့်ရှုရန်စာရွက်စာတမ်းဖွင့်ဖို့လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာသင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရဲ့ contents ဖတ်ပါနှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်နှစ်ဦးစလုံးအရာနှင့်အတူအယ်ဒီတာစတင်သည်။
စာသားစာတန်းထိုးထားပါတယ် အကယ်. Google က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေသည်နှင့်သင်လျင်မြန်စွာဖိုင်ရဲ့ contents တွေကိုအကြားပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။
တည်းဖြတ်ခြင်းစနစ်တကျအသုံးပြုသူရဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့နေသားတကျ, ထိပ် panel ကနေတဆင့်အရပျကိုကြာပါတယ်။
ပဲမိမိချိန်ညှိခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများအောင်မပါဘဲတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းကြည့်ရှုရန်, သင်စာဖတ် mode ကိုပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပစ္စည်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "View" ("View"), ပေါ်ရွှေ့ "Mode ကို" ("Mode ကို") ထို select လုပ်ပါ "View" ("View").
ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတစ်ဦးခဲတံ၏ပုံစံအတွက် icon ကို click ပါနှင့်, တပ်မက်လိုချင်သောအ display ကို mode ကို select လုပ်ပါ။
အဆိုပါ toolbar ကိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုအောင်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးအပြောင်းအလဲများကိုအလိုအလျောက်မိုဃ်းတိမ်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်, ဖိုင်ကိုသင်ကရှာဖွေ Re-ပွင့်လင်းနိုင်မည့် Google Drive ကိုအပေါ်သိုလှောငျထားခြင်းဖြစ်သည်။
Method ကို 2: Zoho Docs
အောက်ပါ site ကို Google ထံမှန်ဆောင်မှုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အခြားရွေးချယ်စရာပေးပါသည်။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့, အစာရှောင်ခြင်းအဆင်းလှခြင်းနှင့်လွယ်ကူပါတယ်, ဒါကြောင့်ရိုးရိုးစာရွက်စာတမ်းရှုမြင်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်လိုသူသည်အသုံးပြုသူများမှအယူခံသငျ့သညျ။ သို့သော်အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကိုနောက်တဖန်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
Zoho Docs ကိုသွားပါ
အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေ site ကိုမှသွားပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "မှတ်ပုံတင်မယ်".
မှတ်ပုံတင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်, အီးမေးလ်နှင့် password နှင့်အတူနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ။ တိုင်းပြည် default အနေဖြင့် setted, သင်မူကားအခြားကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည် - ဝန်ဆောင်မှု interface ကိုဘာသာစကားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီမှလာမယ့်တစ်ဦးကို tick ထားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ထိုအခါ button ကို click "အခမဲ့ sign up ပြုလုပ်ပါ".
တနည်းအားဖြင့်တစ်ဦးကို Google-အကောင့်, LinkedIn အကောင့်သို့မဟုတ် Microsoft ကနေတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုဖို့ဝင်ပေါက်ကိုအသုံးပြုပါ။
ရဲ့ login ပြီးနောက်သင် home page ကိုပြန့်နှံ့ပါလိမ့်မယ်။ စာရင်းထဲမှာ, ရှာတွေ့ "အီးမေးလ် & ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်" နှင့်စာရင်းထဲက select လုပ်ပါ "Docs".
သစ်တစ်ခု tab မှာ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Upload လုပ်ပါ" သငျတို့သဖွင့်ချင်သော ODT-file ကိုရွေးပါ။
တစ်ဦးက window ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါ်လာသည်။ အားလုံးလိုအပ်သော parameters များကိုပြသပါလိမ့်မည်ပြီးတာနဲ့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လွှဲပြောင်း Initiate".
ဒေါင်းလုဒ် status ကိုညာဘက်အောက်ခြေတွင်ပေါ်တွင်ပြသ, အဲဒီနောက်ဖိုင်သူ့ဟာသူဝန်ဆောင်မှု၏အဓိကအလုပ်လုပ်ဧရိယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဖွင့်လှစ်ရန်၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျစာရွက်စာတမ်းဖတ်နိုင် - ပြန်ဖွင် mode မှာလက်ရှိထားလျှင်, စာသား, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားဒြပ်စင် (ဂရပ်ဖစ်, စားပွဲ, etc) ကိုသာပြသပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်တားမြစ်ထားဘာမှပြောင်းလဲနေတဲ့။
, ပွုပွငျပွောငျးလဲစာသားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ပွင့်လင်း Zoho နှင့်အတူစာရေးဆရာ».
သငျသညျ Zoho အားဖြင့်သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းများ « Continue »အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲနှင့်အသုံးပြုသူတည်းဖြတ်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူစတင်သည်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူကိုဖန်တီးရန်။
သုံးအလျားလိုက်အစင်း၏ပုံစံအတွက် Menu ခလုတ်ကိုအတွက်ဝှက်ထားသောပုံစံများအတွက် toolbar ကို။
သူမသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောထင်ရစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဒေါင်လိုက်ပုံစံဒီဇိုင်းရဲ့, ဒါပေမယ့်အတိုအသုံးပြုမှုကိုအပြီးဒီခံစားမှုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတော်တော်ရက်ရက်ရောရောကြောင့်, သင်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရှာတှေ့နိုငျအပေါငျးတို့သ tools များနှင့်အတူ။
အဆိုပါ ODT ၏နေရာလေးကိုကြည့်ရှုသူနှင့်အယ်ဒီတာ, ဒါပေမယ့်သူကမနှစ်မြို့ဖွယ်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ် - ယေဘုယျအား, Zoho ၌တည်၏။ Boot တက်အချိန်, ဖိုင်အလေးချိန်ပေါ်မှာအတော်လေး "လေးလံသော" မှာအဆက်မပြတ်ကို restart, ချွတ်ယွင်းတို့အားပေး၏။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောထည့်သွင်းဒြပ်စင်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်နှင့်အတူချပ်ကြီးမားသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးစာရွက်စာတမ်းများဖွင့်လှစ်ဖို့မအကြံပြုပါသည်။
ကျနော်တို့သင်အွန်လိုင်း ODT-file တွေကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုနှစ်ခုန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ Google Docs ကတော့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် add-ons တွေကို install လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူစာသားအယ်ဒီတာအပေါငျးတို့သညျအခွခေံအင်ျဂါရပေးထားပါတယ်။ Zoho အတွက်လုံလောက်အောင်ထက်ပိုဖြစ်တယ်, built-in functions များ, သို့သော်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ Google ၏ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရာနှင့်အတူစာအုပ်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားသည့်အခါကအကောင်းဆုံးလက်နှင့်အတူသူ့ဟာသူမဟုတ်ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးစာသားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ် Zoho အတွက်အတော်လေးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။